हाम्रो शरीरको बिभन्न अङ्गमा भएका कोठीको रहस्य – Tungoon
काठमाडौ. । माघ ११ गते
शरिरमा पाइने कोठीले सुन्दरतालाई त बढाउँनुका साथै यसले जीवनको थुप्रै रहस्यलाई पनि उजागर गर्ने गर्दछ। शरिरमा पाइने कोठी अथवा मोल्सले तपार्ईंको सुन्दरतालाई बढाउँछ । यो प्राकृतिक रुपमा हुन्छ र कोही मानिसहरुले यसलाई हटाइदिन्छन् पनि । शरिरको टाउकोदेखि खुट्टासम्म कुनै पनि भागमा कोठी हुनसक्छ । तर शरिरमा पाइने कोठीको अलग–अलग महत्व हुने गर्दछ ।
यदि तपाईंको शरिरमा पनि कोठी छ भने त्यसको महत्वको बारेमा थाहा पाउनुहोस्।हाम्रो शरीरमा कुनै प्रकारको जन्मजात वा जीवनकालको क्रममा निस्किएको निशानीलाई कोठी भन्ने गर्छौं । भारतीय ज्योतिष शास्त्रको शाखा समुन्द्र विज्ञानमा शरिरमा भएको चिन्हको आधारमा व्यक्तिको भविष्यको विश्लेष गरिन्छ । शरिरमा पाएको यो निशानीले हाम्रो भविष्य र चरित्रको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ । धेरैपटक समयसँगै कोठी निस्कने गर्दछ भने कुनै गायब हुने गर्दछन् ।
आज हामी तपाईंलाई शरिरको कुन ठाउँको कोठीले कस्तो प्रकारको संकेत गर्दछ।कोठीले तपाईंको सबै प्रकारको शारिरिक, आर्थिक र चरित्रको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ । सामान्यतया कोठी सबैको शरिरमा हुने गर्दछ । कोठीले मानिसको सुन्रतालाई पनि थप्ने काम गर्दछ । शरिरमा कोठी छ भने मानिसहरुले यसको फल के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको हुन्छ । तल शरीरका बिभिन्न अङ्गमा भएका कोठीको बारेमा वणन गरिएको छ ।
१. यदि तपाईंको चिउँडोमा कोठी छ भने तपाईंले भविष्यमा निकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसले तपाईंको जीवनसाथीसँग कलहको अत्यधिक सम्भावना निम्त्याउने गर्दछ।
२. निधारको दायाँ भागमा कोठी हुने व्यक्ति निकै धनवान हुन्छन् । उनीहरुलाई कहिले पनि पैसाको कमी हुँदैन ।
३. यदि तपाईंको निधारको बाँया हिस्सामा कोठी छ भने तपाईंको जीवन निकै कष्टकर हुने गर्दछ । तपाईं आफ्नो जीवन निकै गाह्रो गरेर बिताउनुहुन्छ ।
४. निधारको बिचमा कोठी हुने व्यक्तिका लागि यो शुभ संकेत हो । अनुहारको यो भागमा कोठी भएका कारण तपाईंको जीवनमा कहिले पनि पैसाको कमी हुँदैन । यसका साथै तपाईंले निकै मानसम्मान पनि पाउनुहुन्छ ।
५ दाहिने आँखामा कोठी हुनु शुभ संकेत हो । यसका कारण तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीबाट पूरै जिन्दगीभरि माया पाइरहुनुहन्छ ।
६ . बायाँ आँखामा कोठी हुनु पनि यो अशुभको संकेत हो । यसका कारण तपाईंले पूरै जिन्दगी संघर्ष गरेर बिताउनुपर्ने सम्भावना छ।
७. यदि तपाईंको दाहिने गालामा कोठी छ भने यो शुभको संकेत हो । यसलाई तपाईंले धनवान बनाउँछ । तर यदि तपाईंको बाँया गालामा कोठी छ भने यो अशुभ हो । यसले तपाईंलाई सधैं पैसाको अभावमा बाँच्नुपर्ने संकेत गर्छ ।
८ .ओठमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको भित्रि मनमा निकै प्रेम हुन्छ । यसले तपाईंको कामुक प्रवित्तिलाई पनि दर्शाउँछ ।
९. यदि तपाईंको दाहिने कानमा कोठी छ भने तपाईंको जीवन निकै छोटो छ तर यदि तपाईंको बायाँ कानमा कोठी भएमा यो शुभ हुन्छ । बाया कानमा कोठीले देखाउँछ कि तपाईं सधैं दुर्घटनाबाट बच्नुहुन्छ ।
१०.गर्दनमा कोठी हुनु निकै शुभ मानिन्छ । यसले तपाईंको पूरै जिन्दगी निकै विलासितामा बिताउँने देखाउँछ । यस्ता व्यक्तिहरुको उमेर पनि लामो हुन्छ।
११.यदि तपाईंको दाहिने हातमा कोठी छ भने यो तपाईंको बीरताको संकेत हो जसका कारण मानिसहरु तपाईंलाई सम्मान गर्छन् । बाँया हातमा कोठी हुनेहरुले छोरी नै जन्माउने देखाउँछ।
१२.यदि तपाईंको कुनै पनि खुट्टामा कोठी छ भने यसले तपाईंको असिमित यात्रालाई संकेत गर्छ। अर्थात, तपाईं पूरै जिन्दगी यात्रामा नै बित्नसक्छ।